Qaab Yijie R-99 Waxyaabaha Dheeraadka ah ee Lagu Sii Daayo Wakiilka01
Qaab-dhismeedka: isku-darka birta ah ee saabuunta ku samaysan ee 'synthetic surfactant' Aragtida dibadda: budada cad ama jajabyada Muddada keydinta: laba sano Xidhmada: Isugeynta warqad Kraft ah oo lagu xidho bacda Miisaanka Miisaanka: 25 kg / bac Cagaaran Rubber Nooc ah oo caag ah (NR), caag butadiene ah (BR) . waxaa lagu qori karaa taayirada a ...
Magaca: Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer Carbomer2020 waa iskudhaf isku xiran polyacrylic acid copolymer. Waxay leedahay hanti dheecaan dheer viscous, waxay siisaa isku dhumuc weyn iyo joojinta awooda gaar ahaan nidaamyada wax soosaarka iyo qaababka jel caddeynta dhalaalaya. NM-Carbomer2020 waxay awood u leedahay inay si dhakhso leh u qoyso laakiin si tartiib ah u biyo dhig, iyadoo daboolaysa heer aad u hooseeya. Astaantani waxay fududeyneysaa kala-firdhinta iyo bamgareynta iyo xakameynta geeddi-socodka iyadoo ay ugu wacan tahay naftiisu u kala firidhsan tahay ka hor dhex-dhexaadnimada ...
Magaca: Carbomer996 Carbopol996 Carbomer 996 Carbopol996 waa polymer isku xidha iskutallaabta. Waxaa loo isticmaalaa sidii wax-ka-beddeliye cilmiyaysan oo wax-ku-ool ah, oo awood u leh inuu bixiyo isku-dheellitirnaan sarreeya, iskumid aad u fiican iyo joojinta waxqabadka qiyaasta hoose. Waxaa sidoo kale si ballaaran loogu isticmaalaa kareemada O / W iyo kareemada sidii wakiil hakin kara. Tilmaamaha iyo Faa'iidooyinka Waxyaabaha qulqulka Gaaban Gaarka Sare Joojinta, xoojinta iyo xasilinta awooda Talo Soo Jeedinta Codsiyada Talo bixinta jel Moisturi ...
Magaca: Carbomer 981 Carbopol 981 Carbomer 981 Carbopol981 waa polymer isku xidha iskutallaabta. Waxay u qabataa si la mid ah Carbomer 941. laakiin waxaa lagu polymerized nidaamka co-dareeraha ee ethyl acetate iyo cyclohexane. Astaamaha Iyo Faa'iidooyinka Hantida dheer ee socodka qulqulka Aad u hufnaanta dhexdhexaadka iyo hooseeya. Caddayn sare Codsiyada Lagu Taliyey La mariyo maaddooyinka, kiriimyada iyo jel Jellada nadiifka ah Nidaamyada qaabdhismeedka ionic Qaaciddooyinka Qaaciddada Qaaciddada Nooca caadiga ah ee lagu taliyay ee ah 0.2 ~ 1.5%. Si loo diro ...
Magaca: Carbomer Carbomer 980 Carbopol 980 waa iskutallaab isku xiran oo polimalarlate polymer ah, oo leh polymerized nidaamka iskudhafka ah ee ethyl acetate iyo cyclohexane. Waxay awood u leedahay inay siiso nafwaayay sare, iskumid aad u fiican iyo joojinta waxqabadka qiyaasta yar. Nidaamkeeda socodka gaaban (aan-dareerin) ayaa ku habboon codsiyada sida jellada cad, jellada hydroalkohol, kareemada. Marka alkali dhex dhexaad la noqdo waxay samaysaa biyo dhalaalaya ama jello hiddo-wadayaal ah iyo kareemo. Astaamaha Iyo Faa'iidooyinka Gawaarida Gaaban ...
Magaca: Carbomer 941 Carbopol 941 Carboomer 941 Carbopol941 waa polymer isku xidha iskutallaabta oo leh hanti muddo dheer socotey oo ku jirta mucilage. Waxay bixisaa caddayn aad u fiican oo ku jirta jel waxayna siisaa emulsions joogto ah iyo ganaaxyo hoos u dhac ku yimaada, xitaa nidaamyada ionic. Carbopol941: qulqulka dhaadheer, dareeraha hooseeya, caddayn sare, iska caabbinta dhexdhexaadka ah ee ion iyo caabbinta xiirida, ku habboon jel iyo emulsion. Astaamaha Iyo Faa'iidooyinka Hantida socodka dheer ee aadka u sarreeya Heer sare oo dhexdhexaad ah oo ...